Dyspareunia - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သတိ “၁၈နှဈအောကျမဖတျရ” ( အပိုငျး _၁)
ဒီခေါငျးစဉျတပျပွီးပွီဆိုတော့ ဆောငျးပါးအကွောငျးအရာဟာ လိငျမှုကိစ်စပဲဖွဈမယျဆိုတာ ခနျ့မှနျးလို့ရပါတယျ။
အိမျထောငျကပြွီး စုံတှဲတှမှော လူမသိသူမသိ ကိစ်စရပျတှေ၊ ဖျောထုတျမပွဝံ့တဲ့ လြှို့ဝှကျဖှယျကိစ်စတှကွေောငျ့ တခြို့ အိမျထောငျရေးတှဟော အဆငျမပွဖွေဈကွရပါတယျ။ အဲ့ပွသနာတှထေဲကမှ အဖွဈမြားတဲ့ပွသနာတခုအကွောငျး ပွောပွခငျြပါတယျ။
” လိငျဆကျဆံစဉျအမြိုးသမီးမှ နာကငျြခွငျး” တဲ့ !! ဖွဈနိုငျပါ့မလား? လိငျဆကျဆံတယျဆိုတာ ယောကျြားရော၊ မိနျးမရော သာယာမှုတဈခုရတယျလို့ တျောတျောမြားမြားသိထားကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ တခြို့အမြိုးသမီးတှဟော အိမျထောငျဖကျ အမြိုးသားကို ဒီ ဆကျဆံစဉျ နာကငျြမှာကို ကွောကျလို့ပဲ ရှောငျဖယျဖယျလုပျတတျကွပါတယျ။
ဒီ လိငျဆကျဆံစဉျနာကငျြခွငျးဟာ လိငျဆကျဆံလိုကျတိုငျး စူးစူးဝါးဝါးဖွဈစေ၊ အောငျ့တောငျ့တောငျ့ဖွဈစေ မိနျးမကိုယျနဲ့ သားအိမျနရောမှ နာကငျြခွငျးကိုဆိုလိုပါတယျ၊
ငယျစဉျကလေးဘဝက လိငျအလှဲသုံးစား လုပျခံရဘူးလို့ ( လိငျဆကျဆံစဉျနာကငျြသူတိုငျးကို မဆိုလိုပမေယျ့ ကလေးဘဝမှာ ဒါမြိုးဖွဈခဲ့ဘူးသူတှမှော အတှမြေ့ားတတျပါတယျ)
လိငျဆကျဆံမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ အပွဈရှိသလို၊ ရှကျသလို ခံစားခကျြမြိုးရှိနလေို့ ( ပထမ အကွိမျဆကျဆံလျုဖွဈစေ၊ စိတျလုံခွုံမှုမရှိတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ၊ အခြိနျအခါမြိုမှာ ဆကျဆံမိရငျ မိနျးမကိုယျ ကွှကျသားက အဆငျသငျ့မဖွဈဘဲ နာကငျြစနေိုငျပါတယျ)
အခဈြရညျကွညျ( Lubricant) လုံလောကျစှာမထှကျခွငျး
လိငျဆကျဆံခြိနျမှာ အခဈြရညျကွညျလို့တငျစားချေါ လို့ရတဲ့ အတူနစေဉျ နာကငျြမှုမဖွဈအောငျ အမြိုးသမီးဆီမှ အရညျကွညျထှကျပါတယျ။ ဆကျဆံမှု မပွုခငျ( Foreplay) လို့ချေါတဲ့ နှိုးဆှခွငျးလုံလောကျစှာမရှိဘဲ ဆကျဆံလို့ဖွဈနိုငျသလို၊ အမြိုးသမီးမြား သှေးဆုံးပွီးခြိနျ၊ ကလေးမှေး၊ နို့တိုကျနခြေိနျမှာလညျး သဘာဝအားဖွငျ့ ထှကျတာနညျးသှားတတျပါတယျ။
သောကျနတေဲ့ ဆေးတှကေို ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ပါ။
စိတျကဆြေးတှေ၊ သှေးပေါငျ တကျလို့သောကျရတဲ့ဆေးတှေ၊ အိပျဆေးတှေ၊ ယားယံသကျသာစတေဲ့ဆေးတှေ၊ အခြို့သော ကိုယျဝနျတားဆေးတှရေဲ့ဘေးထှကျဆိုကြိုးကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဆရာဝနျကို သငျသောကျနတေဲ့ ဆေးတှပွေပွီး ဆှေးနှေးကွညျ့ပါ။
ဒဏျရာရဖူးရာကနေ နာကငျြနခွေငျးမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
လိငျဆကျဆံစဉျနာကငျြခွငျးအပွငျ အဖွူဆငျးခွငျး၊ ဆီးပူဆီးကငျြခွငျူတိုနဲ့ တှဲဖွဈတတျပါတယျ။
တခြို့တှငျ မိနျးမကိုယျအပေါကျပွညျ့ဝစှာပါမလာခွငျး၊ အပြိုအမှေးပါး မပေါကျဘဲ ထူထဲစှာရှိနခွေငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အခြို့သော သားအိမျပွသနာမြား ရှိနပေါသလား?
သားအိမျကခြွငျး၊ သားအိမျယောငျခွငျး၊ သားအိမျတှငျး အသားလုံးရှိခွငျး၊ မမြိုးဥ အိမျရအေိပျရှိခွငျးတို့ကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဆရာဝနျက သငျ့ကို မိနျးမကိုယျပိုးဝငျခွငျး၊ သားအိမျပုံမှနျဟုတျမဟုတျ အဖွရှောပေးပါလိမျ့မယျ။
သှေးဆုံးပွီးလို့ နာကငျြခွငျးမြိုးဆိုရငျ Oestrogen ဟျောမုနျးလိမျးဆေးပေးတာ၊ မိနျးမကိုယျ ကွှကျသားလြော့စတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုး ကငျြ့ပေးတာ၊ အိမျထောငျဖကျအခငျြးခငျြး ဖေးမကူညီပွီး အတူဖွရှေငျးတာ၊ Lubricant လို့ချေါတဲ့ ပွငျပ ခြောဆီ အကူအညီယူတာ၊ ပိုးဝငျခွငျးတှအေတှကျ ပိုးသတျဆေးသောကျတာတှေ နဲ့ ပွသနာကို ဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ ဒီကိစ်စမြိုးဟာ အိမျထောငျဖကျ ၂ဦးလုံးပှငျးပှငျးလငျးလငျးဆှေးနှေးပွီး၊ နှေးနှေးထှေးထှေး ဖွရှေငျးသငျ့ကွောငျး အကွံပေးခငျြပါတယျ။
သတိ “၁၈နှစ်အောက်မဖတ်ရ” ( အပိုင်း _၁)
ဒီခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာဟာ လိင်မှုကိစ္စပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
အိမ်ထောင်ကျပြီး စုံတွဲတွေမှာ လူမသိသူမသိ ကိစ္စရပ်တွေ၊ ဖော်ထုတ်မပြဝံ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ဖွယ်ကိစ္စတွေကြောင့် တချို့ အိမ်ထောင်ရေးတွေဟာ အဆင်မပြေဖြစ်ကြရပါတယ်။ အဲ့ပြသနာတွေထဲကမှ အဖြစ်များတဲ့ပြသနာတခုအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
” လိင်ဆက်ဆံစဉ်အမျိုးသမီးမှ နာကျင်ခြင်း” တဲ့ !! ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ ယောကျာ်းရော၊ မိန်းမရော သာယာမှုတစ်ခုရတယ်လို့ တော်တော်များများသိထားကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို ဒီ ဆက်ဆံစဉ် နာကျင်မှာကို ကြောက်လို့ပဲ ရှောင်ဖယ်ဖယ်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီ လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ခြင်းဟာ လိင်ဆက်ဆံလိုက်တိုင်း စူးစူးဝါးဝါးဖြစ်စေ၊ အောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်စေ မိန်းမကိုယ်နဲ့ သားအိမ်နေရာမှ နာကျင်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်၊
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝက လိင်အလွဲသုံးစား လုပ်ခံရဘူးလို့ ( လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်သူတိုင်းကို မဆိုလိုပေမယ့် ကလေးဘဝမှာ ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတွေမှာ အတွေ့များတတ်ပါတယ်)
လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြစ်ရှိသလို၊ ရှက်သလို ခံစားချက်မျိုးရှိနေလို့ ( ပထမ အကြိမ်ဆက်ဆံလ်ုဖြစ်စေ၊ စိတ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အချိန်အခါမျိုမှာ ဆက်ဆံမိရင် မိန်းမကိုယ် ကြွက်သားက အဆင်သင့်မဖြစ်ဘဲ နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်)
အချစ်ရည်ကြည်( Lubricant) လုံလောက်စွာမထွက်ခြင်း
လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ အချစ်ရည်ကြည်လို့တင်စားခေါ် လို့ရတဲ့ အတူနေစဉ် နာကျင်မှုမဖြစ်အောင် အမျိုးသမီးဆီမှ အရည်ကြည်ထွက်ပါတယ်။ ဆက်ဆံမှု မပြုခင်( Foreplay) လို့ခေါ်တဲ့ နှိုးဆွခြင်းလုံလောက်စွာမရှိဘဲ ဆက်ဆံလို့ဖြစ်နိုင်သလို၊ အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးပြီးချိန်၊ ကလေးမွေး၊ နို့တိုက်နေချိန်မှာလည်း သဘာဝအားဖြင့် ထွက်တာနည်းသွားတတ်ပါတယ်။
သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
စိတ်ကျဆေးတွေ၊ သွေးပေါင် တက်လို့သောက်ရတဲ့ဆေးတွေ၊ အိပ်ဆေးတွေ၊ ယားယံသက်သာစေတဲ့ဆေးတွေ၊ အချို့သော ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုကျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို သင်သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေပြပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ဒဏ်ရာရဖူးရာကနေ နာကျင်နေခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ခြင်းအပြင် အဖြူဆင်းခြင်း၊ ဆီးပူဆီးကျင်ခြင်ူတိုနဲ့ တွဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တချို့တွင် မိန်းမကိုယ်အပေါက်ပြည့်ဝစွာပါမလာခြင်း၊ အပျိုအမှေးပါး မပေါက်ဘဲ ထူထဲစွာရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့သော သားအိမ်ပြသနာများ ရှိနေပါသလား?
သားအိမ်ကျခြင်း၊ သားအိမ်ယောင်ခြင်း၊ သားအိမ်တွင်း အသားလုံးရှိခြင်း၊ မမျိုးဥ အိမ်ရေအိပ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က သင့်ကို မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ သားအိမ်ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် အဖြေရှာပေးပါလိမ့်မယ်။
သွေးဆုံးပြီးလို့ နာကျင်ခြင်းမျိုးဆိုရင် Oestrogen ဟော်မုန်းလိမ်းဆေးပေးတာ၊ မိန်းမကိုယ် ကြွက်သားလျော့စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ကျင့်ပေးတာ၊ အိမ်ထောင်ဖက်အချင်းချင်း ဖေးမကူညီပြီး အတူဖြေရှင်းတာ၊ Lubricant လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်ပ ချောဆီ အကူအညီယူတာ၊ ပိုးဝင်ခြင်းတွေအတွက် ပိုးသတ်ဆေးသောက်တာတွေ နဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီကိစ္စမျိုးဟာ အိမ်ထောင်ဖက် ၂ဦးလုံးပွင်းပွင်းလင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး၊ နွေးနွေးထွေးထွေး ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။